Hatreto, olona 60 ireo araha-maso akaiky ao amin'ny hopitaly Anosiala ary ny tena maro amin'ireo dia ireo izay mpandeha fiaramanidina avy any Italie. Raha tsy mafy ny fepetra izay raisina any amin’ny faritany izay misy ranomasina dia ahiana ho tsy mifanandrify ny ezaka ary ho tafiditra ihany ity aretina ity.
LEHILAHY NAMONO ZAZAVAVY
Zazavavy dimy taona izay zana-badiny no novonoin’ilay rangahy ary tsy nananany antra, tetsy Ampasika. Ny anton’izany dia noho ny fifamalian’izy mivady izay mifandraika amin’ny hasarotam-piaro. Ahian-drangahy ho mampirafy azy ramatoa ary dia raikitra ny fikasihan-tànana. Nahavita nitsoaka anefa ilay ramatoa , saingy indrisy fa nifatratra tany amin’ireo zanany izay tao an-trano indray ny rihitra. Tazomina ao amin’ny BC ilay rangahy, 28 taona, nahafaty zaza.
MANAHIRANA NY PIESINA FIARA AVY ANY AZIA
Manomboka sahirana ny mpitaiza fiara avy any Azia ankehitriny noho ny tsy fisian’ny piesy. Izany dia mifandraika amin’ny fanidiana ny sisin-tany ka tsy hampidirana intsony ny sambo mitondra entana na olona avy any Chine ana Corée. Vokatr’izany dia efa manomboka lany ny piesin’ny fiara sinoa sy koerana izay tondraka anefa eto amintsika ankehitriny.
MAMONO AFO MOMBA AN’I MAHAMASINA
Miezaka mamono afo tanteraka mihitsy ny mpitondra amin'izao amin'ilay resaka fanamboarana ny Mahamasina.Tsy maintsy ho vitaina hatramin'ny volana jiona ity kianja ity hoy izy ireo Ary efa mandeha ny fanamboarana ny fototry ny tribune. tsy misy mpiasa sinoa izany koa hoafarana fa izay gasy eo ihany no hanao azy. tena mifanipaka mihitsy amin'ilay nambaran'ny ramatoa manampahaizana amin'ny serasera ao amin'ny fiadidiana ny Repoblika.
MPAMOSAVY TENY ANDOHATAPENAKA ?
Vehivavy iray no nosamborin’ny olona nofatorana teo am-body pôtô omaly, tetsy Andohatapenaka. Ny anton’izany dia nolazaina fa mpamosavy izy noho izy niboridana be. Nivoaka ny mpiambina teo amin’ny manodidina ary nifanome tànana namatotra azy. Ilay ramatoa kosa dia samy nahita azy avokoa ny mpandeha tamin’ny « digue », izy amin’io mbola mitanjaka. Navela teo ary ny fianakaviany no naka sy namaha ny fatotra.